sida lacag looga helo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah, ganacsadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Qeybinta calaamadaha xulashooyinka ikhtiyaariga ah
Ganacsi adeegsiga calaamadaha diyaarka ah waa mid caan ah socodka dadka doonaya inay bartaan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah weligood ma dhammaan doonaan. Ganacsaduhu wuxuu ku nasan yahay laptop, wicitaan ayaa laga maqlay imaatinka calaamadda xigta - meel ayuu furayaa, badda ayuu ku quusayaa kana soo baxayaa wuxuu xirayaa macaashka $ 1000. Xaqiiqdii, taasi ma dhacdo, laakiin halyeey waa qurux.
Laakiin astaamuhu waxay ahaayeen, jiraan oo jiri doonaan, waxaadna u baahan tahay inaad ogaato waxay yihiin iyo halka lagu dabbaqayo. Sidaas:
Ikhtiyaariyada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Kuwani waa aalado loo adeegsado istiraatiijiyado dhowr ah oo falanqeyn farsamo ah (aragtida mowjadaha, tilmaamayaasha, heerarka Fibonacci iyo kuwa kale) oo falanqeeya xaaladda suuqa oo sida ay algorithm u beddelaan natiijooyinka gorfeynta calaamadaha labada lammaane. Calaamadaha waxaa loo diraa ganacsadaha e-mayl, SMS ama si toos ah barta ganacsiga.
Nidaamyo otomaatig ah oo loogu talagalay ikhtiyaarrada Forex, suuqyada iyo suuqyada mustaqbalka ayaa la sameeyay. Waxay u noqon karaan bar bilow wanaagsan falanqaynta qoto dheer ee suuqa waxayna u qabtaan shaqo "qalafsan" ganacsadaha falanqaynta farsamada.
Calaamadaha laga bixiyo alaab-qeybiyeyaasha madaxa bannaan
Saxeexyada waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu tababbarayo ganacsatada leh khibrad, istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah iyo aragtidooda suuqa. Si ka duwan aalado, calaamadaha ka imanaya ganacsatada, marka lagu daro falanqaynta farsamada, waxay tixgelin karaan arrimaha aasaasiga ah. Dhammaan hababka isgaarsiinta waxaa loo isticmaalaa dirista calaamadaha, iyo sidoo kale adeegyo gaar ah oo loogu talagalay koobiyeynta macaamilada, sida ZuluTrade.
Suuqa calaamadaha la bixiyo waa mid aad u ballaaran, laakiin waxaa jira kaliya alaab-qeybiyeyaal tayo leh.
Maaddaama aysan layaab ku ahayn suuqa sidoo kale waxaa jira calaamado bilaash ah, inta badanna laga helo dallaaliin ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh. Badanaa, iyagu waa ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saleysan falanqaynta farsamada waana wax yar oo loo isticmaalo sidii istiraatiijiyadda ugu weyn.
Waxa kale oo jira astaamo “shareware” oo dilaaliintu siiyaan macaamiisha ka dib markay furaan dhigaal. Way adag tahay in laga sheego wax la taaban karo oo ku saabsan tayada calaamadaha, ficil ahaan ma jiraan warbixino dhab ah oo natiijooyinka leh, waxay u badan tahay in natiijooyinka sidoo kale aysan aad u fiicnayn.
Suurtagal ma tahay in la isticmaalo calaamado ama maya?
Haa, waad awoodaa. Maaddaama ay yihiin qayb dheeraad ah oo falanqeyn ah, waa kuwo aad waxtar u leh, maadaama ay bixiyaan xog dheeri ah oo milicsiga ah, gaar ahaan marka aysan jirin wax ku soo aadaya fikradda ganacsadaha.
Nidaamyada otomaatigga ah waxay noqon karaan ilo wanaagsan oo macluumaad ah oo looga fiirsado xaaladda suuqa falanqaynta kaliya ee farsamo iyadoon la helin arrimo aasaasi ah iyo kuwo nafsiyan ah. Laakiin xusuusnow in algorithm-ka ay abuureen nin iyo robotku ay ka tarjumeyso aragtidiisa gaarka ah ee suuqa. Iyo aalado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar u ah inay badanaa qaladaad sameeyaan - dadku waxay haystaan waqti ay ku beddelaan xaaladda suuqa ee hadda jira oo ay go'aanno ku gaaraan xaaladaha aan caadiga ahayn, robotkuna ma sameyn karo.
Dib-u-eegis faahfaahsan oo ku saabsan bixiyeyaasha calaamadaha bixiya ayaa ka baxsan baaxadda maqaalkan - mawduuca waa mid aad u weyn. Laakiin muhiim maahan in loola dhaqmo kaliya si xun. Waxa kale oo jira ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo wanaagsan oo leh calaamado wanaagsan, laakiin ma sahlana in la helo. Hadduu ganacsade iibiyo calaamadaha, mar walba macnaheedu maahan inuusan xirfadle ahayn. Waxaa laga yaabaa in hadafkiisu yahay inuu kordhiyo Depositka isagoon amaahin.
Isticmaal calaamado oo macaash weyn samee!